Homeसमाचारश्वेता खड्का पछि रेखा थापा पनि वि’वादमा, राउटेको नाममा उठाएको पैसा कहाँ गयो? (भिडियो हेर्नु’होस्)
February 24, 2021 admin समाचार 6299
नेकपाका नेता रामकुमारी झाँक्रीले मागेर समाज सेवा हुन न’सक्ने र त्यसको परिभाषा परिव’र्तन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिन् । पछिल्लो समय धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशन, श्वेता फाउण्डेशनको वारेमा सा’माजिक सञ्जालमा चर्चा भएकै बेला झाँक्रीले यस्तो ब’ताएकी थिइन् । श्वेता फाउण्डेशनको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोकमा नि’र्माण हुँदै गरेको माझी बस्तीका बारेमा निकै टि का टिप्पणी भएको हो । अहिले फेरी नायीका रेखा थापाको बारेमा पनि आलो’चना सुरु भएको छ । उनले राउटेका बारेमा गरेको प्रति’वद्धतालाई लिएर आ’लोचना सुरु भएको हो ।
श्वेताको वारेमा चर्चा भइ’रहेको बेलामा क्यानेडामा रहेका पुष्कर भट्टले फेसवुकमा लामो स्टाटस लेखेपछि उनको आलो’चना सुरु भएको हो । उनी अहिले क्यानेडामा छन् । कला’कारीतामा रहेका पुष्करले नायीका रेखालाई राउटेसंगको विषयलाई लिएर लेखेको स्टा’टस अहिले चर्चामा छ । उनले फेसवु’कमा लेखेका छन्, नायीका रेखा थापा ले पनि रेखा थापा फाउन्डेसन र राउटेहरु को सबा’ल मा नेपाली समाज लाई सार्बजनिकरुप मै जबाफ दिन जरुरि छ। किनकि हिजो रेखा थापाले सस्तो चर्चा र परिचर्चा को लागि समा’जसेबीहरु को बिरुद्दमा जुन रिसको आ’गो ओ का ल्दै समाजसेवा अरु को पैसा मा’गेर होइन आफै गर्नु पर्छ भन्नु भयो,
मलाई अ’चम्म लग्यो, २०७१ साल मा म लगायत अरु साथीहरु को संलग्नता मा ताम(झाम का साथ् रेखा थापा फा’उन्डेसन को काठमाडौँ को प्र’सिद्ध होटेल मा उदगाटन गरेर लोपु’न्मुख जातीका राउटे समुदाय को लागि करिब २०० वटा घर सुर्खेत् मा तथा राउटेहरु को बच्चाहरु लाइ उच्छ सि’छया प्रदान गर्ने भन्दै ३ वटा केटा केटि ‘नेपाल राउटे बिकाश संघ’ जोगबुडा, डढेलधुरा का केन्द्रीय अधेछ्य श्री दान सिंह राउटे को सहयोगमा म पुस्कर भट्ट स्वयम् ले नै एस्थानिया पुलिस तथा समुदाय संग लिखित जमानी बसेर काठमाडौ ल्या’केको कुरा सर्बबिधित नै छ। त्यसपश्चात, स्वयम्भु को आनन्दकुटी बि’द्धापिठमा भर्ना गरेको थियो र करिब ३ लाख स्कुल मा तिरेको थियो। अहिले बच्चा कहाँ छन् र किन छन् ?
अनि हि’म्मत्वाली फिल्म प्रमोसन को लागि नजानिदो तरिकाले ४ जना राउटेहरु लाई फाउन्डेसन मार्फत काठ’माडौँ लाएर फिल्म हल (हल चहारेर फिल्म प्रमोसन को लागि सोझा राउटे’हरू लाइ प्रयोग गरेर जुन चर्चा बटुल्न सफल त तपाइँ हुनु नै भयो तर तेस्को भोलि पल्टै राउटेहरु कहाँ गए, कता गए र कसरि गए ? कुनै स’मबेदना र भाबना तपाइँ संग छ ? आज को मिति सम्म जान्न पनि चाहनु भएको छ रेखा जी ? हो मेरो प्रस्न छ कि , यो सबै गर्ने पैसा तपाईलाइ कहाँ बाट आएको थियो ? तपाईले छातीमा हात राखेर ज’बाफ दिनु पर्छ। करिब २(३ करोड पैसा तपाई को आफ्नै थियो कि क्यानाडा को कुनै फाउन्डेसन ले सहयोग गरेको थियो। के त्यो बेला तपाईले चन्दा माग्दा जायज हुने ? अहिले समाजमा केहि राम्रो गरेका समा’जसेवीहरु ले माग्दा तपाइँलाई सहन नहुने ?
आफ्नो पेशा,परिवार र ज्यान’लाई सहित दाऊ मा राखेर , समाज सुधार तथा बिपन्न वर्ग हरु का लागि सामाजिक भाबना राखेर समाजमा नमुना बन्दै यक अर्का मा पारस्प’रिक सहयोग को भाबना राखेर असल समाज निर्माणमा लागेका सम्माननिय धुर्मुस सुन्तली, रबि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही तथा हाम्री समाजसेवी नाईका स्वेता खडका ज्यु को काम माथि तपाई ले प्रश्न गर्नु भन्दा पहिले तपाई रेखा थापा ज्यु ले आफ्नु रेखा थापा फाउ’नडेसन ले के गर्यो भन्ने हेक्का राख्न जरुरि छ। यदि होइन भने तपाई जसो मुख ले समाजमा प्रे’रणा बन्छु भन्ने कलाकार बाट समाज दिगभर्रमित पार्ने र सम्पूर्ण समाजसेवी हरु लाइ निरुत्साहित पार्ने गरि बोल्न छुट पाउनु हुने छैन।
तपाई रेखा थापा ल’गाएत नेता भनिने राम कुमारी झाक्री लाइ पनि समाज सेवीहरु लाइ सहयोग गर्न सक्नु हुन्न भने पनि निरुसाहित पार्ने खाल का अन्त’रबार्ताहरु दिएर छोटो चर्चा मा नआउनु हुन् अनुरोध गर्दछु। थापा र झाक्री ज्यु उहाहरु ? हाम्रा सामाजिक नाय’कहरु ले गरेको जति १५ प्रतिशत मात्र तपाइँहरुले भासन मा बाहेक समाजमा गरेर देखाउनु अनि मात्र अरु को राम्रो काम को बिरोध गरेको सुहाउछ। रेखा थापा फाउन्डेसन को मेनेजर तथा सक्रीय सदश्य को नाता ले मैले राखेको प्रश्न को उत्तर रेखा थापा बाट सर्ब’जिनिक रुप मा पाउने आशा मा छु। धेरै पत्र पत्रिका हरु ले फाउन्डेसन उद्घाटन गर्दा मुख्य समाचार बनाउनु भएको थियो तर फाउन्डेसन ले के गर्यो, के गर्दै छ ? फलो अप स’माचार बनाउन पर्दैन थियो रु यो प्रस्न मेरो सम्पूर्ण मिडियाका साथिहरु लाई पनि छ। – इताजा खबरबाट
October 16, 2021 admin समाचार 4000
February 4, 2021 admin समाचार 7210
आमह’ड्तालका क्रममा राटनगरमा चियानास्ता पसलमा काम गरिरहेका माथि तेल खन्या’याउदा आमा छोरी घाइ ते भएका छन् । हड्तालका क्रममा विराटनगर महानगरपालिका–२ मा रहेको पसल सञ्चा’लन गरेको भन्दै बन्द गर्न पुगेको दाहाल–नेपाल समूहका का’र्यकर्ताले अपरान्ह १२